Yakavanzika Mutemo - Goldenlaser
Golden Laser icharemekedza uye ichachengetedza zvakavanzika zvako. Isu tichadzivirira chero ruzivo rwaunopa paunoshanyira webhusaiti ino.
01) Kuunganidzwa kwemashoko
Mune ino webhusaiti, unogona kunakirwa chero sevhisi yakapihwa, sekuisa odha, kuwana rubatsiro, kurodha pasi mafaera uye zviitiko zvekutora chikamu. Usati wapfuura izvo, iwe unodikanwa kuti uzadze yako yemunhu info iyo iyo yatinogona kukupa yakakodzera sarudzo uye kuburitsa mubairo kwauri kana paine.
Isu tiri causelessly kusimudzira sevhisi yedu uye zvigadzirwa (kusanganisira kunyoreswa) kuzadzisa zvaunoda. Kana zvichibvira, isu tinoda rumwe ruzivo nezve yako kambani, ruzivo pane zvigadzirwa zvedu uye nzira yekubata.
02) Ruzivo rwekushandisa Ruzivo
rwako rwese muwebhu iyi ruchave mukuchengetedza kwakasimba. Neinfo, yedu yeGolden Laser ichakwanisa basa rako riri nani uye nekukurumidza. Mune zvimwe zviitiko, isu tinogona kuzivisa yako yazvino misika yekutsvaga uye chigadzirwa info.
03) Ruzivo rweRuzivo
Tine basa repamutemo rekuchengetedza chero ruzivo rwatinotora kubva kwauri, kusanganisira mhinduro kana dzimwe nzira. Kureva kuti kunze kweGolden Laser hapana wechitatu anofarira ruzivo rwako.
Nekuunganidza ruzivo rwako kubva pawebhu uye nekubatanidza data kubva kune wechitatu bato, isu tinokukurudzira iwe zvakanakisa zvigadzirwa uye sevhisi.
Ongorora: Humwe hukama muwebhusaiti ino, hunongokushandira sezviri nyore uye hunokutora kubva pawebhusaiti ino, zvinoreva kuti Golden Laser yedu haingatore chero mutoro wezvaunoita neruzivo pane mamwe mawebhusaiti. Saka chero zvinyorwa zvekubatana nechetatu chikamu webhu zvichapfuura pane ino gwaro rekuvanzika.
04) Ruzivo Kuchengetedzwa
Takaronga kuchengetedza yako yakazara ruzivo, tichidzivirira kurasikirwa, kushandisa zvisirizvo, kushanyo isingatenderwe, kudonha, mhirizhonga uye kukanganisa. Yese data mune yedu server inochengetedzwa ne firewall, uye password.
Isu tinofara kugadzirisa ruzivo rwako kana uchida. Mushure mekushandurwa, isu tinokutumira iwe iyo chaiyo tsananguro neemail yekutarisa kwako.
Cookies zvidimbu zve data zvinogadzirwa kana iwe ukashanyira webhusaiti yedu uye izvo zvinochengetwa mukuki dhairekitori rekomputa yako. Ivo havazomboparadza kana kuverenga data mukombuta yako. MaKuki anobata nemusoro pasiwedhi yako uye wobhurawuza chimiro chinomhanyisa kutsvaira kwako kune yedu yewebhu panguva inotevera. Zvakare iwe unogona kuramba makuki kana iwe usingade.
06) Zivisa Shanduro
yekushandurwa kwechirevo ichi uye kushandiswa kwewebhu webhusaiti ndeyeGolden Laser. Kana mutemo uyu wepachivande ukachinja nenzira ipi neipi, tichaisa vhezheni yakagadziridzwa pane ino peji uyezve tocherechedza zuva riri pazasi peiri peji. Kana zvichidikanwa, isu tichaisa chiratidzo chinogoneka muwebhu kukuzivisa iwe.
Chero kupokana kunokonzerwa nechirevo ichi kana kushandiswa kwewebhusaiti kunoteerera mutemo unoenderana wePeople's Republic of China.